Mareykanka oo duqayn cirka ah ku dilay dagaalyahan Al-Shabaab ah koonfurta Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo duqayn cirka ah ku dilay dagaalyahan Al-Shabaab ah koonfurta Soomaaliya
Mareykanka oo duqayn cirka ah ku dilay dagaalyahan Al-Shabaab ah koonfurta Soomaaliya
September 8, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo uu Mareykanku ka geystay koonfurta Soomaaliya, sida Taliska Mareykanka ee Afrika ay ku sheegeen bayaan.
“Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, Ciidamada Mareykanka waxay duqayn saxsan ka geysteen gudaha Soomaaliya oo ka dhan ahayd Al-Shabaab maalintii Khamiista ee Sept 7-dii, qiyaas ahaan 2:45 p.m. saacada Somaaliya, waxaana lagu dilay hal argagixiye,” Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sidaa bayaanka ku yiri.
“Howlgalka ayaa ka dhacay meel u dhow Baraawe, oo qiyaas ahaan 270-km dhanka koonfur-galbeed ka xigta caasimada Muqdisho.” Ayaa lagu sii yiri bayaanka.
Waxa uu ahaa howlgalkii labaad oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay qaadeen Mareykanku intii lagu guda jiray asbuucaan. Talaadadii, Mareykanka ayaa qaaday duqayn cirka ah waxayna ku dileen sadeex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab gudaha gobolka Bay.
October 29, 2017 Golaha wasiiradda Soomaaliya oo shaqada ka ceyrshay taliyihii booliiska iyo agaasimihii nabadsugida
July 7, 2017 Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgal ka bilaabay gudaha magaalada Gaalkacyo
June 5, 2017 Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyada qarax lala eegtay saldhig booliis oo kuyaala Kismaayo
September 13, 2017 Ugu yaraan lix dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqaymo uu Mareykanku ka geystay koonfurta Soomaaliya
US airstrike killed Al-Shabab fighter in southern Somalia
Maraykanka iyo Yuhuuda oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo taageero millitari ah oo ay ku baxayso $38 bilyan
Washington-(Puntland Mirror) Maraykanka ayaa saxiixay heshiiskii ugu weynaa oo uu $38 bilyan oo taageero militari ah ku siinayo Yuhuuda tobonka sanno ee soo socda, kaasoo ah heshiiskii ugu weynaa oo abid Maraykanka la galo dal. [...]
125 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Ciraaq
Ugu yaraan 125 qof ayaa lagu dilay dad gaaraya 150 kalena waa lagu dhaawacay qarax ay sheegatay kooxda dowlada Islaamiga ah oo ka dhacay caasimada dalka Ciraaq, Baqdaad. Gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay ayaa [...]
Wasaarada warfaafinta dowlada Puntland oo qaadacday guddiga saxaafada Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka warfaafinta dowlada Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa sheegay in Puntland ay kasoo horjeedo guddiga saxaafada Soomaaliya oo Khamiistii golaha wasiirada ay ku ansixiyeen magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta dowlada Puntland ayaa sheegay in [...]